मन्त्रीका कारण जहाज ढिलो उड्यो कि शाहीका कारण ?
बसन्त थापा, मेरिल्याण्ड अमेरिका
मन्त्री योगेश भट्टराईले कारणवस जहाज ढिला हुन गएकोमा क्षमा मागेका छन् । यसबाट उनी र जिम्मेवारीमा बस्ने सबैले पाठ सिक्ने घटना देखिएको छ । सच्चिने र सच्चाउनु पर्ने अवस्था बुझ्ने घटना देखिएका छन् । तर मन्त्रीको लागी जहाज ढिला हुँदाको बिरोध र विवादले जहाज उड़ान थप ढिला हुन गएकोमा क्षमा याचना र जिÞम्मेवारी ज्ञानेन्द्र शाही र पंचायतको वकालत गर्ने पत्रकारले लिनैपर्छ । भलै मन्त्रीको गल्तीले जहाज उड्न ढिला भएको भए पनि ज्ञानेन्द्र शाही पनि त्यति नै जिम्मेवार थिए जहाज ढिलो उड्नुमा ।
मन्त्रीले आफ्नो पदीय हैसियतमा सर्वसाधारणको मर्का बुझ्ने कोशिष तत्कालै नआएपनि ज्ञानेन्द्रले त बुझेका थिए नि, जहाज नउड्दा त्यहाँका यात्रुलाई कति समस्या भयो भन्ने उनले पहिल्यै मनन गरिसकेका थिए । उनले बाहिर देखि जहाजभित्र सम्म गरेको हुलदंगाको जिम्मेवारी उनले लिनु पर्छ कि पर्दैन । मन्त्रीका कारणले रोकिएको जहाजलाई पहिले उड्न दिएर अन्य कानुनी उपचार तथा सामाजिक संजालमा मन्त्रीका बारेमा प्रोपोगाण्डा पछि पनि गर्न सक्थे नि तर शाहीले त्यहाँ संयमता अपनाएको देखिँदैन । जनताको आवाज बोल्ने शाहीले त्यो संयमता किन अपनाउन सकेनन् ? भन्ने प्रश्न पनि जर्वजस्त उठेको छ यतिबेला जनमानसमा ।
ज्ञानेन्द्र शाही पनि साधारण जनता होइनन् एउटा संगठनको नेतृत्व लिइ रहेका नेता हुन् भन्दा फरक पर्दैन् । सामाजिक संजालमा उनी नेता अनि जनताका आवाज बोक्ने व्यक्तित्व बनेर छाइरहेका पनि छन् । पत्रकार पनि साधारण जनता होइनन् पंचायतमा यस्तो हुने थिएन भनेर स्थिति भड्काउने, विवाद बनाउने पत्रकारको पेशा र उद्धेश्य कदापी हुनु हुुँदैन ।
ज्ञानेन्द्र शाहीले नेता–नेता बिचमा हुने सौहार्दता बनाएर मन्त्रिज्यु यो राम्रो भएन भनेर अर्को कुनै मंच र कार्यक्रममा जे बोल्नु र भन्नु थियो गरिनु पथ्र्यो भन्ने सुझवुझसहित भिड़न्त, विवाद हुने र जहाज थप ढिला उडान हुने कार्यमा संग्लग्न हुनु हुन्थेन । आखिर बिरोध र विवादको कारण उडान थप ढिला हुन त गयो नि यसको जिम्मेवारी पनि त विरोध गर्नेहरूले लिनु पर्ला नि !
जहाज यात्रा र राजनीति संवेदनशील बिषय हो । यस्तो ठाउँमा यस्ता खाले बिबादले पाइलट, यात्रु र नेता कार्यकर्ताहरूको मानसिकता बिग्रन सक्छ र ठूलो दुर्घटना पनि घट्न सक्छ । उड़ान र यात्रा थप ढिला हुन जान्छ । जुन योगेश र ज्ञानेन्द्रको कारण उड़ान डबल ढिला हुन गएको छ । यसमा दुबै पक्ष गलत छ न्। यो रोकिनु र सच्चिनु पर्छ । अझ यसबाट राजनैतिक माहौल र नेता, कार्यकर्ता, समर्थक बिच बैमनस्यता र भिड़न्त हुन जाने र सक्ने अवस्था बन्न जान्छ ।
पत्रकारको काम घटना बारे आम जनतामा सू–सचित गराउने र यस्तो भए जनआक्रोश र बिरोध तपाइहरू सामु देखिन्छन भनेर लेख्ने र सम्झाउने हो आमने–सामने भएर तथानाम बोलेर, साधारण यात्रुलाइ उचालेर, बिवाद गर्नु, थप उड़ान ढिला हुने अवस्था बनाउनु होइन । यदी यसो गरिने हो भने कुनै नेता, मन्त्री, पत्रकार, कलाकार, पेशाकर्मी र जनताहरूले कुनै कार्यक्रम र काम गर्न सक्दैनन् ।विरोध र अबरोध मंच र फिल्ड मै हुन थाल्छन । पत्रकार र नेता ज्ञानेन्द्रको यो शैली र मानसिकताले यही निम्ताउछ । समाजलाइ भिड़न्त र विवाद तिर पुराउछ । यो आत्मघाती बिरोध शैली र कदम हो । ढिलासुस्ति र अनियमितता कहि र कसैले गर्नु हुदैन । तर, विरोध, भिड़न्त र विवादले हुने थप क्षति, ढिला हुने काम पनि बिरोध गर्नेहरूले गरिनु हुदैन ।
काम कसरी गर्ने ? बिरोध कसरी गर्ने ? भन्ने कुरा संसद र राज्यमा हुनेले, जिम्मेवार पेशा गर्नेले, राजनीति र साधारण जीवनयापन गर्नेहरू हामी सबै जो आम सडक, घर टोल, गाउ, शहरहरूमा छौ, सबैले आ–आफ्नो तह र क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएर बसेका छौ यसकारण पनि यस्ता कुरामा सबैले बुझ्नु पर्दछ । सत्ता भेट्यो कि बिग्रने, सत्ता गुम्यो कि बौलाउने, गलत भयो कि झम्टने, बिरोधी देख्यो कि आक्रोशित हुने शैली, विधि र प्रवृति सबैले छोड्नु पर्छ । यस घटनाबाट थप ढिलासुस्ति रोकिउन, प्रति घटना र भिड़न्तहरू नहुन । सबै संवेदनशील, शहनशील, सचेत र सजग होऔ ।